Gatiin Dhiiga Gootota Keenyaa Amma Bilisummaan Deebi’utti Qabsooo itti jirruu fi FXG Finiinsinee Itti Fufuun Dirqama Lammummaa ti! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooGatiin Dhiiga Gootota Keenyaa Amma Bilisummaan Deebi’utti Qabsooo itti jirruu fi FXG Finiinsinee Itti Fufuun Dirqama Lammummaa ti!
Baarentuu Gadaa Irraa, Ebla 13, 2018
Gatiin dhiiga goota tokkoo ammamii? Ykn maaliin gatii dhiiga gootaa kaffalu, goota lammiif wareegame tokko yoo maaltu dhugoome ykn hojiirra oole gumaan isaa deebi’e jedhama? jedhamtanii yoo gaafatamtan maal deebistu?
Akkuma hundii keenyaa quba qabnutti sadarkaa har’a irra jirru kanarra gahuuf gootonni yoomiyuu seenaan isaan hin daganne wareegama hedduu kaffalaniiru. Lubbuu qaalii, kan homaanuu hin jijjiramne itti kitimaniiru. Lammiif jecha adda isaanii rasaasaaf, dugda isaanii ulee diinaaf laataniiru. Wareegama ulfaataa qaamaa qalbiin nama cabsu itti baasaa turaniinis injifannoo duubatti hin deebine galmeessanii ummata Oromoo boonsaniiru. Kabaja itti uwwisaniiru.
Weeratoonnii fi gabroomfattootni uummata Oromoo darbaa dabarsaan weeraranii saamaa turan gootoota Oromoo warra lammii isaaniif dabarsanii of kennan kana adamsanii ajjeesaa turaniiru. Oromoon erga gabrummaa jalatti kufee akkuma bubbulee erga ilmaan isaa muratoon gabroonfattoota ummata Oromoo weeraranii saamaa turanii fi jiran kana gateettii Oromoorraa buusuuf erga falmuu eegalanuu bubbuuleera.
Guyyaa waraanni gita bittaa Habashootaa asii fi achiin uummata Oromoo weeraruu eegalee asii Oromon addatti ilmaan isaa qaroon sabaa lolarra jiru, wareegama qaqqaalii seenaan hin daganne baasaa jiru. Eenyummaa fi biyya abbaa isaa kabachiisuuf qabsoo hadhooftuu gaggeessaa jira.
Walumaa galatti Oromoo jaarraa 1 fi walakkaa oliif wareegama qaqqaalii kafalaa lola diddaa gabrummaa walirraa hin cinne, lola of ittisaarra jira jechuutu danada’ama. Keessumaa bara 1991 erga wayyaaneen biyya Oromoo humnaan qabattee qabeenya Oromoo saamuu eegaltee as qabsaawotni, sabboontotni, uummanni Oromoo baddaa gammoojjitti, magaalaa baadiyyaatti,keessaa alaa qabsoo walirraa hin cinne, qabsoo lubbuu gaafatuu finiinsaa jira.
Weerartoonni Habashaa biyya Oromoo humnaan qabatanii saamaa turanii fi jiran “akkam mirga keessaniif qabsooftu, maaf gabrummaa hin fudhanne, maaliif olaantummaa keenya mormitu, yoo saamamtan maaliif hin callifne kan jedhuun yakki isaan Oromoorratti addatti, sabboontota qabsaawoota ilmaan isaarratti hin raawwatin hin jiru.
Hammeenyi isaanii amma hin qabu. Hedduu hidhaniiru, dararaniiru, ajjeesanii karaarratti gataniiru. Haa ta’uutii goota tokko ajjeesaniis goonni biraa lakkuu lakkuun biqilaa har’a sadarkaa hundeerraa isaan raasuu gaheera.
Teediroos Oromoo namorme jedhe hunda harka ciree ture. kaan hidhee qileetti darbeera. Oromoon kanaan rifatee ykn jiilee qabsoo mirga abbaa biyyummaarraa dhaabbate hin turre. Gotichi Oromoon walloo dhumarratti isaawuu galaafate. Minilkis akkasuma Oromootti duulee addatti Oromoo giddu galeessaarratti xiyyeeffatee aadaa fi afaan balleessuu bira darbee yakka sukanneessaa kan isa morme hunda fannisuu, mana irratti gubuu raawwachaa ture. haa ta’uutii Oromoo fi Oromumma balleessee akka yaade biyya; biyya habashootaa, biyya nafxaynootaa godhuu hin dandeenye. Hayila sillaaseen isa hordofee dhufes akkuma akkoo fi akaakilee isaa yakka danuu Oromoo irratti raawwatee Oromoo dhabasiisee biyya Oromoo dhuunfachuuf yaalus gotota Oromoo darbaa dabarsaan guca bilisummaa walirraa fuudhaniin kaayyoon isaa fashalee innuu du’a saree du’e. Ajjeefamee awwaalli isaalee bakki osoo hin beekamin hafe. Abbaan irree fi faashistiin sirni Darguus ilmaan Oromoo sabboontoota mirga saba isaaniif qabsaawaan adamsee fixuurraa kaasee yakka hedduu qabsoo bilisummaa Oromoo irratti raawwatus itti hin milkoofne. Yaaliin isaa hundi gotota Oromoo lubuu isaanii saba isaaniif dabrsanii kennaniin harkaa fashale. Dargiin ofiifuu xumurri isaa bushaayee, fokkisaa ta’ee hafe. Murni amma Oromoo unkuraa jiru sirni wayyeenee EPRDF ofiin jedhuu fi waggoota 27n darbaniif Oromoo irratti yakka raawwachaa tures akkuma yakkamtoota mootota kaleessaa uummata Oromoo addatti sabboontoota qabsaawoota ilmaan isaarratti xiyyeeffatee qabsoo Oromoo ukkaamsuuf shira danuu hojjetaa turus itti hin milkoofne.
Wayyaaneen Ilmaan Oromoo sabboontota qabsoowoota qaroo sabaa ukkaamsaa tureera. Ajjeesaa fi dararaas tureera, haa ta’uutii kunoo qabsoon, FXGn kan yeroo kamiituu caalaa itti fufee tokko yoo wareegamu tokko itti darbaa Oromoo fi qabsoon isaa sadarkaa har’a irra jiru kanarra gaheera. Akkuma muldhachaa jiru yaaliin wayyaanee hin milkoofne.
Dhiigni gootoota keenyaa firii naqachaa hamileen diinaa cabaa jira.
Ebli 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ti. Guyyaan kun guyyaa gootonni bilisummaa ummata Oromoo fi biyya Oromiyaa argamsiisuuf falmaa irratti wareegaman kan itti yaadannuu dha. Guyyaa isaan firii amma lakkaawaa jirru kana argamsiisuuf wareegaman itti yaadatamanii dha. Guyyaan kun guyyaa ulfaataa dha. Guyyaa kana ilmaan Oromoo danuu, kan dhiiga isaanii bilisummaa saba isaaniif dhangalaasan itti yaadatamanii dha. Guyyaan kun keessumaa qabsaawoota ABO fi WBO biratti haala addaan yaadatama. Ebilli 15 kan bara 2018 ammoo Oromoo maraafuu guyyaa addaa ti. Sababni isaas har’a Oromoon gatii dhiiga goota isaa takka lama jedhee bilisummaan lakkaawuuf balbala irra wayta gahee jiruu dha. Gumaa wareegamtoota isaa kadhaan osoo hin taane irree ilmaan isaan argachuuf diina oofee qarqararraan gaheera. Gatiin dhiiga gootaas isa kana, goonni gumaan isaa bilisummaan saba isaa mirkanaa’uu dha. Wareegamtoonni, gootonni Oromoo hunduu gatiin dadhabbii fi lubbuu isaanii walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromoo ti.
Isatu gatii dhiiga isaaniti, isatu gumaa isaaniti. Isaaf kufan, amma inni kun dhugoomuttis qabsoon goota qabsoorra jiruun itti fufa.
Ebilli 15, guyyaan gootoota wareegamtoota Oromoo Oromoof guyyaa gaddaas guyyaa gammachuutisi. Ilmaan isaa qaroon sabboontoonni qabsoowonni dhugaa malee diina biyya isaa weeraree saamaa jiruun dhumuun isaanii Oromoof gadda. Dhiiga isaaniin, wareegama isaaniin ifi argaa jiru ammoo isa gammachiisa. Ibsaan, daamootiin bilisummaa, xurreen daandii haqaa argisiiftu isaan qabsiisan yoo akkanatti gamaa gamasii anga’u, yoo Oromoo maraaf ifu arguun nama boonsa, abdii namaaf kenna. Yoo qabsoon Oromoo saboota biraafuu abdii ta’ee argan nama gammachiisa. Yoo diinni biyya Oromoo weeraree qorqaa ture wayyaaneen dhiphatu, qabsoo gootonni dhiiga isaanii itti dhangalaasaa turanii fi jiraniin lafti itti dukkanaawuu fi bilisummaan Oromoo dhugoomuu jala gahu arguu caalaa kan nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuu guyyaan kun Oromoof guyyaa gammachuus, guyyaa gaddaasi.
Oromoon kamuu har’a yoo gootota isaa warra baddaa gammoojjitti baadiyyaa magaalaatti yeroo adda addaa bilisummaa isaaf wareegaman yaadatu inni guddaan qalbeeffachuu qabu waa lama. Inni duraa qabsoon eegalame, FXG gootota keenya Ebla 15 barabaraan yaadannu itti wareegaman walabummaan Oromiyaa, bilisummaan Oromoo galma gahutti cichaan qabsoo itti fufuu dha. Waadaa keenya haaromsinee kaayyoo goototni keenya irratti wareegamaa turanii fi jiran iddoon gahuuf, qabsoo keenya gama hundaanuu cimsachuu dha. Inni lammaffaan holola diinni ofii fi karaa ergamtoota isaa akka waan mirgi Oromoo karaa wayyaanee deebi’aa jiruutti hololu dura dhaabbachuu, gurra kenuufii dhiisuu dha. Kan dhiiga gootoota keenyaatti kabaja horu kana, kan Oromootti bilisummaa uwwisee diinatti biyyee uffisu daandiin kanaa fi kana qofa. Gootoota keenya wareegaman yaadachaa kaayyoo isaan irratti wareegaman san galmaan gahuuf cimnee haa qabsoofnu!
Kabajaa fi ulfanni Wareegamtoota keenyaaf haa ta’u!